ဇန်နဝါရီလ 2019 |4၏စာမျက်နှာ 35 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2019 » ဇန္နဝါရီလ (စာမျက်နှာ 4)
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / ထုတ်လုပ်ခြင်းအဆိုတော်အငယ်တန်း - အလယ်အလတ်အဆင့်
ရာထူး: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / ထုတ်လုပ်ခြင်းအဆိုတော်အငယ်တန်း - အလယ်အလတ်အဆင့်ကုမ္ပဏီ: Evertype BrandDesign တည်နေရာ: San Diego မှ, CA အမေရိကန်ပို >>
ရှင်းလင်းမှု-COM စျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာအဖြစ် Rachel ARCHIBALD ခနျ့အပျ
Clear ကို-Com®ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောတိုးတက်မှုနှုန်းကိုထောကျပံ့ဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသရုပ်ပြ, Marketing ကို၎င်း၏သစ်ကိုဒါရိုက်တာအဖြစ်ရာခေလသည် Archibald ခနျ့အပျခဲ့သညျ။ လိုလားသူအသံစက်မှုလုပ်ငန်း၏တစ်ဦးကဝါရင့်, Archibald စျေးကွက်၏ဒါရိုက်တာအဖြစ် 17 နှစ်များတွင်အထှတျအထိ, ပို. ပို. အကြီးတန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအခန်းကဏ္ဍအတွက် Meyer အသံမှာ 12 နှစ်ပေါင်းနေခဲ့ရသည်။ သူမသည်သိသိသာသာလှူဒါန်းခဲ့သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုဦးဆောင် ...
San Francisco မှာလုပ်စျေး
Post ကိုထုတ်လုပ်မှုစစ်ပြန် Jon Ettinger, Doug Walker က, ဘရိုင်ယန် Lagerhausen နှင့်ကော်မက်ဒေါ်နယ်တွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကို်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့အေဂျင်စီများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များကိုရည်ရွယ်သည်ဟုဖန်တီးမှုစတူဒီယိုကိုဖွင့်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို-မြားဖှဲ့-SF, အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့တစ်ဦးဖန်တီးမှုစတူဒီယို, San Francisco မှာဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Jon Ettinger, အယ်ဒီတာ / ဒါရိုက်တာ Doug Walker ကများနှင့်အယ်ဒီတာများအားလုံးယခင်ကသားရဲ၏ဘရိုင်ယန် Lagerhausen နှင့်ကော်မက်ဒေါ်နယ်, ...
ရာထူး: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဗီဒီယို International ကုမ္ပဏီ: Bosch ရဲ့ Group မှတည်နေရာ: တောင်ပေါ်က Prospect IL အမေရိကန်ပို >>
Global Production ရဲ့ IP Truck ကား Monza မှာ Ferrari ပြိုင်ကားအရောင် Shoot-ထွက်ဆွတ်ခူး
ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ 4K HDR [Munich, 30 ဇန်နဝါရီလ 2019] အပါအဝင်အားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာသာလွန်ကိုက်ညီမှုကယ်တင်တတ်၏မြင်ယောင်ကြည့်ပါ - နည်းပညာဆက်သွယ်ရေးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ရာမှနိုဝင်ဘာလ 2018 အတွက် Autodromo Nazionale di Monza မှာပုံမှန်မဟုတ်သောစိန်ခေါ်မှုအတွက်အောင်မြင်သောသက်သေပြခဲ့သည်။ ၎င်း၏စနစ်များ Ferrari ပြိုင်ကားကစီစဉ်တစ်ခုကျယ်ပြန့်စမ်းသပ်မှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသောအရာကို Global ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့် operated သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှက Ultra HD ထုတ်လုပ်မှုထရပ်ကား, ပါဝါ ...
ရာထူး: ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ကုမ္ပဏီ: ဒစ်ဂျစ်တယ်ခုနစ်တည်နေရာ: မိုင်ယာမီ FL အမေရိကန်ပို >>